Website Dayniile oo been abuur joogto ah ku haayo masuuliyiinta safaarada Turkiga iyo Safiirka Somalia ee Turkiga. Waa Maxayse Ujeedka? – idalenews.com
Shabakada Dayniile.com ayaa in dhawaalaba caado ka dhigatey aflagaado iyo been abuur joogta ah oo ay ku hayso shaqaalaha iyo masuuliyiinta sare ee Safaarada Soomaaliya ee Turkiga, gaar ahaan Safiirka Soomaaliya Ee Turkiga Ambassador Maxamed Mursal, Shabakadaan oo u adeegaysa shaqsiyaad dano gaar wata isla markaasna ah xildoon cadow ku ah danaha ummada Soomaaliyeed ayaa aad u daneynaya xil ka qaadis lagu sameeyo safiirka si ay u gaaraan himiladooda siyaasadeed iyo tan dhaqaale iyagoo adeegsanaaya warar aan jirin iyo fadeexad sal iyo baar toona laheyn oo danjiraha Mr Maxamed Mursal Sheekh lagula kaco sharafkiisa.
Safaarada Soomaaliyeed ee Turkiga ayaa noqotey safaarada kaliya ee howl muuqata oo la taaban karo haddana aan la soo koobi karin u qabatey shacabka Soomaaliyeed haddey ahaan lahayd gudaha dalka Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool gudaha Turkigaba mudadii gaabneyd ee ay jirtey, waxaana lagu amaanaa iney ka shaqeysey horumarinta xiriir aad u wanaagsan oo dhex mara labda dal Soomaaliya iyo Turkiga.
Ma jiraan wax cabasho ama eedeyn haba yaraatee ka soo yeereysa muwaadiinta soomaaliyeed ee halkaas ku nool haddey noqon lahayd ardeyda, qaxootiga, iyo ganacsatadaba. Safiirka iyo Masuuliyiinta kale ee safaarada waxay had iyo jeer kormeer iyo ka warqabid ku hayaan ardeyda iyo dadka Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jira iyadoo weliba dhowr jeer oo hore dadaal u galey sii daynta maxaabiis badan oo xasbiyada Turkiga ku jirey.
Masuuliyiinta Sare Sare ee Safaarada Soomaliya ee Turkiga shaqada culus oo ay hayaan ka sakow waxay ardeyda Soomaaliyeed u diyaarisaa fantasiyo gaar ah iyo mid ay kala qeybgalaan marka sidaas laga soo codsado waxaana Maxamed Mursal Sheekh lagu amaaney mid u dhaga nugul dhamaan baaqyada ardeyda iyo ka qabygalka barnaamijyada lagu hormarinayaayo hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, taasoo laga dheehan karo sawiro hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ee Safaarada gudaheeda ku xeeran.
Ma ahan markii ugu horeysey ee ay shabakada www.dayniile.com kula kacdo masuuliyiinta Soomaaliyeed ee safarada Turkiga ka howlgala, waxay tiro dhowr jeer aflagaado iyo been abuur kuwaan la mid ah u geysteen masuuliyiinta sare ee dowlada sida Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo gudoomiyaha barlamaanka iyo dowlada inteeda kale iyadoo ujeedkeedu yahay in ay u adeegto cadow had iyo jeer u taagan duminta dhismaha qaranka Soomaaliyeed iyo iney abuurto kala qeybsanaan shacabka Soomaaliyeed.